PressReader - Kwayedza: 2019-01-11 - ZGC yopinda mumakoreji
Kwayedza - 2019-01-11 - Denhe Reruzivo - Daphne Machiri
KOMISHENI yeZimbabwe Gender Commission (ZGC) iri kushanda nemayunivhesiti mukurwisa kumbunyikidzwa kwevadzidzi – kunyanya vanhukadzi – munyaya dzine chekuita nezvepabonde izvo zvinonzi zviri kudzorera shure budiriro yavo padzidzo.
Sachigaro wekomisheni iyi, Mai Margaret Mukahanana-Sangarwe vanoti vakaona zvakakosha kuti vapinde mumayunivhesiti vachirwisa nyaya dzekushungurudzwa kwevanhukadzi.
Mai Mukahanana-Sangarwe vanoti pari zvino komisheni yavo iri kushanda nemayunivhesiti anosanganisira University of Zimbabwe, Midlands State University, Great Zimbabwe University, National University of Science and Technology neAfrica University mukurwisa kushungurudzwa Mai Mukahanana-Sangarwe kwevadzidzi. vepayunivhesiti iyi vanosanganisira
“Takavamba tsvakurudzo Vice Chancellor tikaona idzi mushure mekutambira kuti iri idambudziko rinoda mashoko ekumbunyikidzwa kutariswa,” vanodaro. kwevanhukadzi kubva Mai Mukahanana-Sangarwe kuMidlands State University vanoenderera mberi vachiti, uko kunonzi kune vadzidzisi “Takatotanga kuferefeta nyaya vechirume vanoti kuvanhukaidzi tikaisa zvakare masuggestion dzi kuti upase chikoro tanga boxes ekuti tiwane wadanana neni kana kuenda nekunzwa zvinoitika payunivhesiti pabonde zvisina kuwirirana. iyi maereano nekumbunyikidzwa Izvi zvinodzorera shure kubudirira kwevanhukadzi kwavo mudzidzo. munyaya dzine chekuita
“Takataura nevakuru nebonde.”